Kobc wax-soosaarayaasha Teendhada | Warshada Kobcinta Teendhada Shiinaha & Alaab-qeybiyeyaasha
Kori Teendhada 100*100*200 CM Hydroponics Beeridda Gudaha Gudaha
Virex 100 * 100 * 200 koraan teendho, waa naqshad T albaabka, iyo alaabtu waa 600 D maro oxford ah iyo in ka badan 95% mylar milicsiga.
60x60x120 CM Grow Teendho La Habeeyay Qolka Beerta Kobaca
Virex 60 * 60 * 120 cm waxay koraan teendho leh hawo-qaadayaal hawo leh iyo daaqada mesh-ka
300*300*200 CM Sanduuqa Teendhada Koritaanka Waara ee Qoraaga Oxford Mylar
VIREX 300 * 300 * 200 cm koraan teendho ku habboon beerashada gudaha iyo dibadda awood ballaaran ayaa kori karta dhir badan oo sahlan in la rakibo.
150*150*200 CM Kobaca Teendhada Koritaanka Guryaha cagaaran
Cabbirka teendhada koraan ee Virex waa 150 * 150 * 200 cm, walxuhuna waa 600 D maro oxford ah, in ka badan 95% mylar milicsiga, tuubada rinjiyeynta cad iyo kondhiyeyaasha ABS.
Virex 90 * 60 * 90 cm koraan teendho yar yar kuma qabsanayso meel bannaan, fududahay in la guuro. Tayo wanaagsan oo waara, fududahay in la rakibo.
40*40*120 CM Kori Teendhada Dhaqanka Hydroponic Geedka cagaaran ee Gudaha
Beeritaanka teendhada ee cagaaran waxay si wax ku ool ah u horumarin kartaa koritaanka dhirta, hagaajinta heerka koritaanka dhirta. Xajmigiisa yar ma qaado meel bannaan, fududahay in la rakibo oo la guuro. Ku habboon koritaanka guriga ama gudaha.
2 In1 Grow Tent 600 D Sanduuqa Koritaanka Guriga ee Warshada Mylar ee Milicsiga Sare
Teendhada 2-in-1 waxay ku habboon tahay ganacsiyada iyo guryaha, oo leh saddex goobood oo lagu beero dhirta iyo ubaxyada kala duwan, taas oo u oggolaanaysa in si fiican loo eego loona maareeyo koritaanka dhirta.
Saqafka Cube Koritaanka Teendhada Kulul ee Biyaha Caan ka ah ee Albaabada Koraaya Teendhada Buuxa
VIREX saqafka sare ee cube koraa teendhadu waa naqshad ka duwan, u eeg guri. Loogu talagalay saqafyada, saqafyada, iyo saqafka hoose, waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku beerto dhirta saqafyada, aqallada, saqafka hoose, iyo qolalka saqafyada hoose leh.